पानी बाँच्नका लागि [सन्दर्भ : Nepal Water Expo 2012] #WaterExpo
Aakar April 30, 2012
समस्या नै समस्याको बिचमा पनि हामी गज्जबसँगले बाँचिरहेकाछौँ । लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्दि अनि पानीको अभावको बिचपनि हामी आफ्नो जिविका चलाइरहेकाछौँ । हामीलाई बाँच्नको लागि अत्यावश्यक पानीको महत्व कति छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिरहनु पर्दैन होला, किनकी हामी सबैलाई थाहा छ, पानीविना हाम्रो जिवन चल्न सक्दैन । हामीलाई यो पनि थाहा छ, काठमाडौँमा पानीको हाहाकार कति छ!
पानी भर्नको लागि लाइनमा घन्टौँ बस्नुपर्ने अनि पानी नदेखिने बाग्मतीको बारेमा, हामीलाई काठमाडौँमा पानी पाइन्थ्यो, बाग्मतीमा पौडि खेल्थ्यौँ, बाग्मतीको माछा खान्थ्यौँ जस्ता कुराहरु भनिँदा परापूर्वकालको कथाहरु जस्तो लाग्ने गर्छ । तर काठमाडौँमा पानी देखेका, बाग्मतीमा पौडि खेल्नेहरु भन्छन्, २० वर्ष अघिसम्म पनि बाग्मती धेरै राम्रो थियो, काठमाडौँमा यति ढुंगेधाराहरु थिए कि, पानीको कुनै समस्या नै हुँदैनथियो । अहिले त खै, न बाग्मतीमा पानी देखिन्छ न ढुंगेधारा नै देखिन्छ । कहिँकतै ढुंगेधारा देखिइहाले पनि पानी भने देखिँदैन ।
काकाकुलको जिवन बाँचिएपनि, कहिले पूराहुने छाँट नदेखिएको मेलम्चीको पानी सम्झिँदै, कुनै बेला त मेलम्ची पनि आउला नि भन्दै फोहोर र प्रदुषित पानी पिउन बाध्य हुनुपरेको छ । सायद १५-२० वर्ष अघिसम्म, नेपालमा पानी किनेर खानुपर्छ भन्दा कसैलाई पत्यार लाग्दैनथियोहोला ! तर अहिले पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ तर त्यसरी किनेर खाइएका पानी पनि सुरक्षित छैनन् । पानीका जारमा लेउ भेटिन्छन्, अनि पानीका ट्यांकहरुले जहाँ पायो त्यहीँको पानी वितरण गर्छन् ! काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने जिम्मा लिएकाहरुले आफ्नो पानीको मुहान सफा राख्न सकेका छैनन् । पानीको समाधान निस्किनुको सट्टा झन् झन् समस्या थपिँदैछ ।
एक हिसाबले हेर्नेहो भने, पानीका कारण शान्ती सुव्यवस्थामा पनि खलल परिरहेको छ । लामो लाइन लागेका धाराहरुमा पानी थाप्ने निहुँमा झगडा हुनु सामान्य नै बन्दै गइसकेकोछ । पानी सबैलाई चाहिएकोछ, सबैलाई पुग्दो चाहिएकोछ, चाँडो चाहिएकोछ ।
पानीको अभाव र समस्या नै विच पनि नेपालमा पहिलोपटक ‘नेपाल वाटर एक्सपो २०१२’ [Nepal Water Expo 2012’] नामक कार्यक्रम यही मे ४ देखि ६ सम्म, युनाइटेड वल्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वरमा आयोजना हुँदैछ । शान्ती र सुरक्षाका लागि पानी अर्थात ‘Water Sustainability for Peace and Security’ भन्ने नारा सहित आयोजना हुन लागेको पहिलो पानी प्रदर्शनीमा करिब ५०-६० स्टलहरु हुनेछन् ।
एक्स्पोमा पानीको संरक्षण कसरी गर्ने, भइरहेको पानीलाई कसरी उपयोग गर्ने, पानीबाट कसरी बढिभन्दा बढि फाइदालिने आदि विषयमा स्टलहरु राखिनेभएकाछन् साथै यसै विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले आफ्ना कुराहरु पनि बाँड्नेछन् ।
पानीको सदुपयोग भन्दा याद आयो, हिजो यही वाटर एक्स्पोको छलफल कार्यक्रममा पुग्दा पोखराबाट आउनुभएका विश्वनाथ पराजुलीसँग भेट भएकोथियो ! कार्यक्रममा उहाँले, आफूले तरकारी किनेर खाने नगरेको बताउनुभयो । पराजुलीले भन्नुभयो, “म तरकारी किनेर खान्न, आफूलाई आवश्यक पर्ने तरकारी म आफैँ फलाउने गर्छु । सबैले आफ्नालागि तरकारी आफैँ फलाउनु पर्छ । पानी छैन भनेर, तरकारी नरोप्नेहरु अल्छि हुन् ।” उहाँको तर्क थियो, “पानी छैन भन्नुभन्दा पनि भएको पानीलाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ, जति नै पानी छैन भने पनि बिहान मुख धुने त हामी सबै गर्छौँ, खाना खादाँ पनि पानीले नै हात धुन्छौँ, यदि हामी साँच्चै पानीबाट केही गर्ने हिम्मत राख्छौँ भने, त्यही मुख धोएको पानी, हात धोएको पानीलाई पनि प्लाष्टिकमा जम्मा गरेर राख्न सकिन्छ, आफ्नो करेसावारी छैन भने, गमलामै तरकारी रोप्न सकिन्छ, त्यही हात धोएको पानी हाल्न सकिन्छ” । कुरा सुन्दा त हो नै जस्तो लाग्यो, तर पनि अहिलेसम्म यस किसिमको प्रयास आफूले गरिएको छैन । तर पराजुलीले आफूले यही अभियान सुरु गरेको बताउनु भएको थियो ।
हाम्रो प्रमुख समस्या बनेर रहेको ‘पानी’को बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएकोछ । कसरी, कहाँ, कहिले पानीको प्रयोग गर्ने, कसरी पानी र यसका श्रोतहरुको संरक्षण, संवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल वाटर एक्स्पोमा छलफल हुने भएको छ ।
पानी मेरो पनि समस्या हो भन्ने लाग्छ भने, तपाईहरु पनि उक्त एक्सपोमा सामेल हुनसक्नुहुन्छ ।
Events: Nepal Water Expo 2012
Date: 4-6th May (बैशाख २२, २३ र २४ गते)
Venue: Direction Exhibition & Convention Center, 4th Floor, UWTC Building, Tripureshwor, Kathmandu
For more info: Visit Nepal Water Expo Facebook Page